News | Ministry of Home
News | Tag: Ministry of Home
कसले खायो गृहको डेढ करोड सुराकी ?
काठमाडौँ । गत वर्ष शन्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान कमजोर रह्यो । ठूला घटनाका अभियुक्त पत्ता लाग्न सकेनन् भने राजधानीमा विप्लव समूहले बम बिष्फोट गराउँदा सर्वसाधरणको मृत्यु भयो ।
गृहमन्त्री बादललाई कसले कुट्न खोज्दैछ हँ ?
काठमाडौँ । नेपालको सबैभन्दा सुरक्षित प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा बस्छन् गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल । सिंहदरबारलाई चारै तिरबाट नेपाली सेनाको पहरा छ । अझ सिंहदरबार परिसरको उत्तर दिशामा हतियारधारी सुरक्षाकर्मी चौबिसै घण्टा तैनाथ रहन्छन् तर पनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई असुरक्षा महसुस भइरहेको चर्चा गृहमन्त्रालयमा चलेको छ ।
जनयुद्धका घाइते तथा अपाङ्ग र गृहमन्त्रालयबीच यस्तो सहमति
काठमाडौँ । विभिन्न माग राखेर अनसन बस्दै आएका जनयुद्धका घाइते तथा अपाङ्ग र गृहमन्त्रालयबीच सोमबार सहमति भएको छ । छलफलमा चार बुँदे सहमतिपछि गत मङ्सिर २७ गतेदेखि चलेको अनसन तोडिएको हो । आज भएको छलफलमा अनसन टुङ्ग्याउने, थुनामा रहेका युवराज विकलाई आजै रिहा गर्ने, गम्भीर घाइते तथा तत्काल उपचार गर्नुपर्ने घाइते अपाङ्गको उपचार तत्कालै शुरु गर्ने र नेपाल मेडिकल बोर्डले बाहिर लगेर उपचार गर्न सिफारिस गरेकालाई उपचारका लागि पहल गर्ने सहमति भएको छ ।
गृहमन्त्रालयले उद्धारका लागि समयमै अनुमति नदिँदा क्यानेडियन पर्यटकको मृत्यु
काठमाडौं । गृहमन्त्रालयका कर्मचारीले समयमै उद्धारका लागि अनुमति नदिँदा बुधबार डोल्पामा एक पर्यटकको मृत्यु भएको छ।
सुरक्षकर्मीलाई घरेलु काममा लगाउने प्रहरीका उच्च अधिकारीको पेन्सन काट्ने तयारीमा गृह मन्त्रालय
काठमाडौं । तल्ला तहका सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदार बनाउने प्रहरीका उच्च अधिकारीको पेन्सन काटिने भएको छ। गृहमन्त्रलायले यस्ता प्रहरी अधिकारीको पेन्सन कट्टा गेर्न तयारी थालेको छ।
गृहमन्त्रीलाई आइजीपीको यस्तो चुनौती
काठमाडौं । कुनै समय सरकारका सबैभन्दा लोकप्रिय मन्त्री रहेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ अहिले सबैभन्दा विवादमा छन् । अपरिपक्व कदम तथा विवादास्पद निर्णयहरुका कारण उनको चर्को आलोचना भइरहेको छ । यहीबेला उनलाई हटाउन एक समूह सक्रिय भएको छ ।
गृहमन्त्री थापाको आदेश भन्दै अपहरणको शैलीमा डा.अधिकारीलाई मन्त्रालय लगियो
काठमाडौं । वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरमा कार्यारत डा. भोजराज अधिकारीलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदी पथिकले मंगलबार मन्त्रालयमा झिकाएर भनेअनुसार काम गर्न अनुचित दबाव दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयद्वारा धर्म प्रचारमा संलग्न फिलिपिनी दम्पतीलाई देश निकाला
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले व्यावासायिक प्रवेशाज्ञा बिजनेस भिसाको आडमा चर्च चलाएर धर्म प्रचारमा संलग्न फिलिपिनी दम्पतीलाई एक वर्ष नेपाल प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाई निष्काशन डिपोर्ट गरेको छ।